3 Arrimood Oo Ay Tahay Inaad Xasuusato Kahor Intaadan Dib U Bilaabin Shukaansi - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»3 Arrimood Oo Ay Tahay Inaad Xasuusato Kahor Intaadan Dib U Bilaabin Shukaansi
Marka uu qofku la kulmo furriin xun, waxaa intabadan wanaagsan oo caafimaad uu ugu jiraa qofkaas inuu xoogaa ka nasto haasaawaha.
Kadib marka uu qofka kulamada Haasaawaha ka maqnaado waqti ku filan, waxaa sidoo kale la gaaraa waqti uu qofkaas diyaar u yahay inuu mar kale dib ugu laabto kulamada.
Markay timaado inaad mar kale dib u gasho kulamada Haasaawaha, waxaa jiraan dhowr arrimood oo la xasuusto.
Waa kuwaan qaar kamid ah arrimahaas.
1. Ka fikir qofka aad rabto inaad shukaansato
Si qofku mar kale u bilaabo haasaawe, wuxuu u baahanyahay inuu hubiyo in lamaanihiisa cusub ay jeceshahay ama uu jeclyahay.
Haa raadsan qof raba inuu buuxiyo booska laakiin raadso qof kaa dhigi doona mid xiriirka cusub ku dareema nolol raaxo iyo farxad leh.
2. Maskaxda ku haay saaxiibadaa
Waligaa ha hilmaamin saaxiibadaa gaar ahaan kuwii ku garab istaagay waqtiyadaadii adkaa. Waxaa lagaa rabaa in xiriirka uusan kaa dhigin qof hilmaama wax kasta oo saaxiibadaa ay kuu sameeyeen.
3. Hala barbardhigin nin kasta ninkaagi hore
Haweenka dhowaan lasoo furay ayaa la sheegay inay u heystaan in ragga oo idil ay iskumid yihiin. Arritaan waa mid haweenka ka fogeeysa ragga wanaagsan.
Sidaa darteed, waa muhiim inaadan u maleyn in nin kasta oo uu la midyahay ninkaagi hore.
Haasaawaha Haasaawe kulamada Haasaawaha Shukaansi Xiriirka